Laba ka mida kuraastii lagu doortay Baydhabo oo doorashadooda dib loo qabanayo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Laba ka mida kuraastii lagu doortay Baydhabo oo doorashadooda dib loo qabanayo
Laba ka mida kuraastii lagu doortay Baydhabo oo doorashadooda dib loo qabanayo
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa caawa waxba kama jiraan ka soo qaaday laba ka mida kuraastii Golaha Shacabka ee dhawaan lagu doortay Magaalada Baydhabo.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ayaa sheegay in kursiga tirsigiisu yahay #HOP154, oo ay ku guuleysatay Sareedo Maxamed Cabdalla in habkii loo maamulay doorashadiisa aysan waafaqsanayn habraacyada doorashada.
“In kursiga sumadiisu tahay HOP154, habkii loo maray doorashadiisa aysan waafaqsanayn habraacyada doorashada, iyadoo musharax ka mid ah kuwii u tartamayay uusan buuxin shuruudihii murashaxnimada, qodobka 3aad ee heshiiskii 1-da October 2020. Sidaasi daraadeed natiijada kursigaas oo ka dhacday Baydhabo 29-kii November 2021 waa waxba kama jiraan, doorashadiisuna dib ayaa loogu noqonayaa.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga.
Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in dib loogu noqon doono doorashada kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP103, kaasi oo uu ku guuleystay Maxamed Cali Xasan, oo ah Wasiirka Howlaha Guud ee Koonfur Galbeed. Kursigan waa midka buuqa ugu weyn uu hareeyay, ka dib markii Prof. Maxamed Cismaan Jawaari oo u sharaxnaa uu ku andacooday in Maamulka Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed ay u diideen shahaadada musharaxnimadiisa Golaha Shacabka.
“Kursiga uu tirsigiisu yahay HOP103, iyadoo la tixraacayo go’aanka guddiga sare ee ku xusan warqadda sumadeedu tahay (TXR/GHD/0056/21), soona baxday 27-kii November 2021 go’aankaas oo lagu hakiyay in la qabto doorashadiisa. Sidaasi daraadeed marka habraaca la dhameystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa.” Ayaa qoraalka lagu sheegay.
Kow iyo toban ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka ayaa bishii November lagu doortay Magaalada Baydhabo.
Previous articleQarax ka dhacay Awdiinle oo afar qof ku dhimatay
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo bogaadiyay go’aanka Guddiga Doorashooyinka